DPA Microphones သည် Mormon Tabernacle Choir | နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောသဟဇာတဖြစ်မှုကိုဖန်တီးသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » DPA Microphones သည် Mormon Tabernacle Choir နှင့်အကောင်းဆုံးသဟဇာတဖြစ်မှုကိုဖန်တီးသည်
DPA Microphones သည် Mormon Tabernacle Choir နှင့်အကောင်းဆုံးသဟဇာတဖြစ်မှုကိုဖန်တီးသည်
Salt Lake City, စကျတငျဘာ 17, 2015 - နီးပါး 90 နှစ်ပေါင်းကမ္ဘာပေါ်မှာအကျော်ကြားဆုံးဂီတအဖွဲ့များကိုတစျခု, အဆုံးစွန်သောနေ့သူတော်စင် '(LDS) ၏ယေရှုခရစ်အသင်းတော် Mormonism တဲ Choir 94 လူဦးရေသန်းအထက်သို့ရောက်ရှိ, 12 နိုင်ငံများတွင် spanning ပရိတ်သတ်အခြေစိုက်စခန်းပါတယ်။ ဒီပြင်းအားတစ်အောက်ပါအချက်များကိုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့, အုပ်စုရဲ့အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်ဂီတနှင့်ပြောပြီစကားလုံး 2,000 တီဗီနှင့်ရေဒီယိုစခန်းများထက်ပိုမိုအပေါ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေသည်။ ထို့အပြင် 350 အဆိုတော်နှင့် 100 အပိုင်းအစသံစုံတီးဝိုင်းတို့ပါဝင်သည်သော choir, မှန်မှန်ကမ္ဘာတဝှမ်းအကြီးမြတ်ဆုံးနေရာများအချို့မှာလုပ်ဆောင်တယ်။ အဆောက်အဦများနှင့်ပြပွဲအမျိုးအစားထိုကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးဖြတ်ပြီးတသမတ်တည်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့်ထုတ်လွှင့်အသံကသေချာခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ choir ရဲ့အသံအဖွဲ့ရွေးချယ်တော်မူပြီအဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ DPA မိုက်ခရိုဖုန်း '' ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုထက် ပို. အဘို့ထုတ်ကုန်။
မကြာသေးမီကအဖွဲ့ LDS ညီလာခံရေးစင်တာမှာရှေ့ဆောင်နေ့ဖျော်ဖြေပွဲနှင့်အတူခရီးစဉ်အဆုံးသတ်, New York မှာရန်ကီးအားကစားကွင်းနှင့်ဂျီခန်းမ, Bethesda, Maryland ကနှင့်ဘော်စတွန်, မက်ဆာချူးဆက်အတွက်ကွင်းထဲကနေနေရာတိုင်း choir လုယူသောက၎င်း၏ 2015 အတ္တလန္တိတ်ကမ်းခြေခရီးစဉ်, ပတ်ရစ်တော်မူပြီးမှ Salt Lake City, ၌တည်၏။ အခုတော့သူ့ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးအဖြစ်အပျက်, ခရစ္စမတ်ဖျော်ဖြေပွဲများအတွက်ခြစ်ခြစ်ထဲမှာ, choir ကမ္ဘာတဝှမ်းပရိတ်သတ်များအတွက်တနင်္ဂနွေရက်တွင်ဖျော်ဖြေဖို့ရောက်နေပါတယ်။ လမ်းပေါ်တွင်သို့မဟုတ်နောက်ကျော Utah အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ပြပွဲ DPA မပါဘဲအပေါ်မလိုက်မသွားဘူး။
"ကျနော်တို့ DPA ရဲ့သုံးပြီးခဲ့တာ ဃ: screet ™ 4061 အသေးစားမိုက်ခရိုဖုန်း သီးသန့်နီးပါး 10 နှစ်ပေါင်း string ကိုအပိုင်းပေါ်, "Trent Walker က, အ Mormonism တဲ Choir များအတွက်အသံအင်ဂျင်နီယာကပြောပါတယ်။ DPA ရဲ့ဃ၏နိဒါန်းနှင့်အတူ: 4099 စာရွက်စာတမ်းမိုက်ခရိုဖုန်း™မဲ, အဃ: screet ™ 4061 MICS ယခုထက်ပိုသောလေ့နောက်ထပ် DPA ရဲ့မိုက်ကရိုဖုန်းဖြေရှင်းချက်၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပြ, lavalier MICS အဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။
အဆိုပါ ဃ: dicate ™ 4023 Cardioid မိုက်ကရိုဖုန်း အဆိုပါ choir ရဲ့စန္ဒရားကြီးသားအပေါင်းတို့လေး၌ရှိကြ၏။ "သူတို့ကအစဉ်အမြဲငါကိုအသုံးပြု-ကျနော်တို့တော့သူတို့ကိုအားဖြင့်အသက်ရှင်ဟာအကောင်းဆုံးစန္ဒရား MICS ပါပဲ။ အဆိုပါအဆိုတော်တန်ဆာကြီးမားတဲ့အခန်း၌တံပိုးမှုတ်သောအခါဘယ်လိုကြိုက်တယ်ဘယ်တော့မှဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ DPA မှ switching မတိုင်မီကအဆိုပါ choir အဖွဲ့ဝင်များသံစုံတီးဝိုင်းခရီးစဉ်အပေါ်သူတို့ကိုအတူလိုက်ပါခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ထိုအချိန်မှစ. တစ်ခုလုံးကိုအုပ်စုတစ်စုတိုင်းရှိုးအတူတူခရီးထွက်ခဲ့သည်။ ဒါကတကယ် DPA MICS ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ "
ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ acoustic သံကိုမျှော်လင့်သည့် choir ရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲတက်ရောက်ရန်ဒါပေမယ့် Walker ကတစ်သံစုံတီးဝိုင်းများအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအသံမှအထောက်အကူမဖြစ်ပြောပါတယ်ထားတဲ့ကြီးမားတဲ့နယ်ပယ်ထဲမှာဒီလိုဆောင်ရွက်မှမကြာခဏခက်ခဲပါတယ်။ "ငါသည်ဃအတူတော်တော်လေးတိကျစွာကထပ်ဖွနိုင်ခဲ့တယ်: screet ™ 4061 MICS" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "ငါသည် string ကိုအပိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆောင်ခဲ့နိုင်ပြီးသင်စင်ပေါ်မှာသူတို့နှင့်အတူညာဘက်ထိုင်ပါတယ်နဲ့တူရဲ့။ သူတို့ကိုငါမပါဘဲတိုက်ရိုက်ရှိုးလုပ်နေတာစိတ်ကူးလို့မရပါဘူး။ ငါမဆိုအခြားအမှတ်တံဆိပ်နဲ့ string ကိုအပိုင်း MIC နှင့်ပင်ကျွန်မအထူးသဖြင့်တကယ့်ကိုတင်းကျပ်စွာ, ကောင်းတဲ့သံစုံတီးဝိုင်းသံကိုရဖို့မဖြစ်နိုင်သလောက်ဖွင့်ဘယ်မှာကြီးမားတဲ့နေရာ၌, DPAs ထဲကရနိုင်သောအရာကိုဖို့ကနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်မျှလမ်းရှိပါတယ်။ "
DPA ယင်း choir များအတွက်ဂိမ်း changer ဖြစ်ခဲ့သည်။ "ဒါဟာတကယ်ကို, အသံအင်ဂျင်နီယာသံစုံတီးဝိုင်းနဲ့ choir ကာကွယ်ငါ့ကိုအကြားဆက်ဆံရေးကိုပြောင်းလဲ," Walker ကဆက်လက်ရေးသားထားသည်။ "ကျနော်တို့ကသူတို့ကတစ်ဦး 21,000 ပေအခန်းထဲမှာလုံးဝနီးပါးမဖြစ်နိုင်ခဲ့သည့် acoustic ပြပွဲ, စောင့်ရှောက်ဖို့အလွန်ခဲယဉ်းကြိုးစားခဲ့မတိုင်မီသော်လည်း, တဦးတည်းကအရမ်းဘက်ပေါင်းစုံယူနစ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဘယ်အရာကိုနောက်ဆုံးမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသည်ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှစင်ကြယ်သောအသံပြပွဲစောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားနေအဖြစ်များနှင့်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုထားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ "
DPA ရဲ့ဃ: screet ™ 4061 မိုက်ခရိုဖုန်း Walker ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးအရေးပါလှပေသည်, သူကသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်အဖြစ်မိုက်ခရိုဖုန်း၏သဘာဝအသံကလမ်းဦးစားပေးသွားမည်။ "ဒီဃ: screet ™ 4061 MICS ညီမျှခြင်းကနေအခန်းကိုဖယ်ရှားပစ်ပါ" ဟုသူမရှိတော့ပရိသတ်ကိုအဘို့စင်မြင့်ပေါ်တွင်အသံကပုံတူပွားဖို့တအိမ် PA ဆိုပြီး system ပေါ်တွင်မှီခိုအားထားလိုအပ်နေ၏ကပြောပါတယ်။ "ဒီသေးသေးလေး MICS တုံ့ပြန်ချက်ကိစ္စများမဆိုမျိုးကိုဖယ်ရှား, သူတို့ပဲအံ့သြဖွယ်အသံ။ အဆိုပါဃ: screet ™ 4061 မိုက်ခရိုဖုန်းရုံကအရမ်းတိကျချောမွေ့ဖြစ်ကြသည်။ ငါစင်ပေါ်မှာထိုအရပ်၌သူတို့ကို၏ 70 ထွက်ကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ငါတုံ့ပြန်ချက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ရန်ရှိသည်ဘူး။ ကျနော်တို့ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အတူတူ MICS ကိုသုံးပါ, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိုးများအားလုံးမှတဆင့်တစ်ဦးမလိုအပ်တဲ့သံကိုသေချာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကတည်းကသူတို့က, အဖြစ်ကောင်းစွာကြောင်း၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတခုပါပဲ။ "
Walker ကလည်း DPA ရဲ့ကိုအသုံးပြုသည် ဃ: screet ™ 4080 Lavalier အသေးစား Cardioid မိုက်ကရိုဖုန်း ဗွီဒီယိုကိုအညွန့်နဲ့ပစ္စုပ္ပန်များအတွက်အဖြစ်အတော်ကြာ ဃ: 4026 Cardioid ™ dicate မိုက်ခရိုဖုန်းဆှဲ တစ်ဦးအတွက် Decca သစ်ပင် အဆိုပါ LDS ညီလာခံရေးစင်တာ၏အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်ဧရိယာထဲမှာအစီအစဉ်။ "အဲဒီ setup ကိုနှင့်အခြားဃအကြားတွင်: dicate ™နှင့်ဃ: screet ™ MICS, ငါတို့သည်သင်တို့အနေနဲ့နယ်ပယ်တွင်ပြပွဲကာလအတွင်းနားမထောင်စေခြင်းငှါ, အဘယျသို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲခန်းမမှာပုံတူပွားနိုင်ပါတယ်" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "မင့် 1,500 လူတို့အဘို့, ဒါပေမယ့် 20,000 အဘို့, DPA အသံအရည်အသွေးကယ့်ကိုကြှနျုပျတို့အတှကျခြားနားချက်ကိုဖန်ဆင်းဒါ။ တကယ်တော့ကျနော်တို့ခုနစျပါးကပိုပစ္စည်းများဝယ်ယူတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့နေဆဲသော်လည်း, နေ့တိုင်းကျွန်တော် 10 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဝယ်သူများကိုအသုံးပြုပါ။ "
Trent သူတို့အခန်းထဲမှထွက်လမ်းလျှောက်အဖြစ်တိုက်ရိုက်ပရိသတ်တွေ၏ရှင်ကြီးမှအနီးကပ်အာရုံစိုက်မှု paid, နှင့်၎င်း၏ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘယ်သူမှအနီးအနားမှာအဆိုပါမိုက်ခရိုဖုန်းကိုသတိပြုမိသူကပြောပါတယ်သိရသည်။ "ဒီဖျော်ဖြေပွဲကယ့်ကိုကျွန်တော်ရနိုင်သကဲ့သို့ပွင့်လင်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုမိုက်ခရိုဖုန်းကကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ ကျနော်တို့ကယ့်ကိုကောင်းတဲ့အရာ, ကြီးမားတဲ့သံကို system ပေါ်တွင်ငွေအများကြီးကုန်ပေမယ့် DPAs ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေတပြင်လုံးလက်မှတ်သံတံခါးသော့ပါပြီ။ ကျနော်တို့လုပ်နေလုပ်နေအရာအားလုံးသူတို့အားမိုက်ခရိုဖုန်းများ၏အရည်အသွေးအပေါ်မှာအခြေခံတာဖြစ်ပါတယ်။ "
အဆိုပါ 350 အဆိုတော်တွေပဲ 15 ပေ string ကိုအပိုင်းနောက်ကွယ်မှဖျော်ဖြေနှင့်အတူအထီးကျန်အရေးကြီးပါသည်။ "ဟုအဆိုပါဃသော်လည်း: screet ™ 4061 မိုက်ခရိုဖုန်း omnidirectional ဖြစ်ကြောင်း, ကြိုး '' MICS မှတဆင့် choir ၏အသံပိုင်းခြားမသိနိုင်ဖြစ်ပါတယ်" ဟု Walker ကပြောပါတယ်။ ဤသူကိုလည်းကုမ္ပဏီ၏တပ်ဆင်ထားသူ Mike ဧည့်သည် soloists အတူတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်ရဲ့ပေးသော, မရှိမဖြစ်အရေးပါသည် ဃ: ဒဏ်ငွေ™ 4088 Direct နားကြပ်မိုက်ကရိုဖုန်း။ နားကြပ်မိုက်ခရိုဖုန်း၏ဤအမျိုးအစားတစ်မူထူးခြားတဲ့လျှောက်လွှာ, အ 4088s အဆိုပါ PA ဆိုပြီးပညာရှင်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ပိုပြီးအမြတ်ပေး, ဒါကြောင့်သူတို့စင်ပေါ်မှာအများကြီးပို MICS ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ "သူတို့က MICS ကိုချစ်နှင့်အဆိုတော်အဖြစ်ကောင်းသောအမှုကိုပြု," Walker ကမှတ်ချက်ပြုထားသည်။ "ငါသည်ပင်ပြောနေတာခေါင်းပေါ်မှာထားတော်မူ၏။ ငါတကယ်ဃတူသောဤ application များ၏နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအချော™ 4088 MICS, သူတို့ကယ့်ကိုတင်းကျပ်နှင့် dual-နားကိုအတူ mount နေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မရွှေ့ပါဘူး "။
ဒဏ်ငွေသူအဖြစ်ကောင်းစွာထုတ်လွှင့် application များအတွက်အသုံးပြု 4088 MICS, ™, ဆိတ်ငြိမ်နေသောခေါင်းစဉ်: Walker ကလည်းဃကြောင်းတန်ဖိုးထား။ "မိုက်ခရိုဖုန်း၏တစ်ဦးကအများကြီးကြင်နာ၏ဆူညံနေကြသည်ပေမယ်ဃ: ဒဏ်ငွေ™ MICS မဟုတ်နှင့်တစ်ဦးအလွန်တိကျမှန်ကန်အကြိမ်ရေတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူမြင့်မား SPL ကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ " ဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့အသံကိုကြီးမားတဲ့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာသီချင်းဆို applications များ, အဘို့အထူးအရေးကြီးပါတယ် ကွင်း၏အကွာအဝေး။
ဂီတအစိတ်အပိုင်း Mormonism တဲ Choir ထုတ်လွှင့်များ၏အများဆုံးချစ်ရာသခင်သည်အဘို့ဖြစ်စဉ်အခါ, Mormonism Channel ကို, အ LDS ရေဒီယိုဘူတာရုံပေါ်ပြပွဲမှာလည်းထိုကဲ့သို့သောလူထုပုံပြင်များနှင့်တကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးမိန့်ခွန်းအဖြစ်ဇာတ်ကြောင်းအစိတ်အပိုင်းများ, ပါဝင်သည်။ Walker ကအဆိုပါဃန်ထမ်းနေစဉ်ဤစပီကာများအတွက်ဒဏ်ငွေ™ 4088s သူယေဘုယျအားဖြင့်ထိုအကးတစ်ဦးစင်မြင့်မိုက်ခရိုဖုန်းသုံးစွဲဖို့ကြိုက်နှစ်သက်သည်။
"သူတို့ကတစ်ဦးစင်မြင့်မိုက်ကရိုဖုန်းအဖြစ်အံ့သြဖွယ်ရှိပါတယ်" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "ငါသည်ထုတ်လွှင့်ဘို့, အသံဖမ်းစတူဒီယိုမှာသူတို့ကိုသုံးပြီး, ငါသည်ဤလောက၏ကျော်ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုအသုံးပြုပါ။ ငါငါးထုံးစံစင်မြင့်တည်ဆောက်ရန်, သူတို့ထဲက 10 ဝယ်နှင့်သောယောက်ျားတွေသုံးတဲ့သာဖြေရှင်းချက်ပါပဲ။ ကျနော်တို့ထွက်ရှိတိုင်း option ကိုကြိုးစားခဲ့င်, ငါတို့သည်နှစ်ခု 4081s နှင့်အတူအသုံးပြုနေသည်အရာကိုပင်နီးကပ်ဘာမှမရှိဘူးခဲ့, ငါ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချ "DPA ယခုဃကမ်းလှမ်း: ။ screet SC4098 စင်မြင့်မိုက်ခရိုဖုန်း, တူညီတဲ့သေးသေးလေးမိုက်ခရိုဖုန်းနှင့် acoustic ်ရောက်စွက်ဖက်အသုံးချရန်အရာ ပြွန်နည်းပညာ။
အားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသန်းအိမ်တွေ 12 ငှါ, CBS ကရေဒီယိုကွန်ယက်ပေါ်တွင်၎င်း၏ရှိုးများအပြင်၌, Mormonism တဲ Choir ဖျော်ဖြေပွဲစပိန်နှင့်ပေါ်တူဂီ, အင်္ဂလိပ်အတွက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေကြသည်နှင့် Mandarin တွင် rebroadcast များအတွက် edited ။ မြားစှာပရိတ်သတ်များနှင့်အတူအမြဲတမ်းတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောအမှတ်တံဆိပ်နဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ "ကျွန်မနေတဲ့ကုမ္ပဏီအဖြစ် DPA နှင့်အတူတကယ်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်" Trent ကထပ်ပြောသည်။ "သူတို့ကအလွန်အထောက်အကူဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်, သူတို့ရဲ့အာမခံအမြဲပထမဦးဆုံးအတန်းအစားဖြစ်ရပြီ။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တစ်ဦးပြဿနာရှိခဲ့ဖူးပါဘူး။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကယ့်ကိုအသံအရည်အသွေးဂရုစိုကျနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဂရုစိုက်သောအရာကိုအမှန်တကယ်ပါပဲ။ ထိုနေ့၏အဆုံးမှာအားလုံးပြပွဲမဟုတ်ဘဲမိုက်ခရိုဖုန်းသို့မဟုတ်အသံ system သို့မဟုတ်ဘာမှပေမယ့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပတ်သက်ပြီးပါပဲ။ ကြောင်းစုံလင်သောင်လျှင်, ငါတို့ရှိသမျှသည်ပျော်ရွှင်ပါတယ်။ "
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောမော်ဒယ်နံပါတ်များကတည်းကဆက်လက်အသံစုံလင်ခြင်းအဘို့အင်း၏ပစ္စည်းကိရိယာများသက်တမ်းတိုးဖို့နှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ရန် DPA မိုက်ခရိုဖုန်းအပြင်းအထန်လုပ်ဆောင်အဖြစ်, updated ပါပြီ။ အဆိုပါဃခြင်းဖြင့် dicate ™ 4023ER, အ 4011: အဆိုပါ 4026 အဆိုပါဃဖြင့်အစားထိုးထားသည် dicate ™ 4015ER နှင့် 4021 ယခုဃဖြစ်ပါသည်: dicate ™ 4011C ။ နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်မှာတွေ့နိုင်ပါသည် www.dpamicrophones.com.
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-09-17
ယခင်: NETIA 2015 ရေဒီယို Show ကိုကုန်ပစ္စည်းကို Preview
နောက်တစ်ခု: ဟောလိဝုဒ် Center ကစတူဒီယိုအသုံးချ Uniform, လုပ်ငန်း Wi-Fi Network ကို